PSJTV | आमाहरुको सम्मानको लागी राकेश गुरुङको ‘आमा’ नै काफी !
आमाहरुको सम्मानको लागी राकेश गुरुङको ‘आमा’ नै काफी !
बुधबार, १३ बैशाख २०७४ पिएसजे न्युज
पोखरा १३ , बौशाख
'आमा' अर्थात आत्मैदेखि माया गर्ने मानिस । एउटी आमाले उनका छोराछोरीलाई गरिरहने निस्वार्थ भावको मायाले 'आमा' शब्द सबैको लागि आत्मिय बनेको छ । हरेक आमाको माया, प्रेम र स्नेहले उनको मात्तृत्वको परिचय दिने गर्छ । नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्न वैशाख कृष्णऔँसीका दिन आज आमाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा मनाइँदैछ ।यहि दिनको अबसरमा सबै आमाहरुको सम्मानको लागी राकेश गुरुङको नया मर्मस्पर्शी गीत आमा बजारमा आएको छ।
भिडियो साझेदार साइड युबट्युव मार्फत संगित तथा भिडियो सार्वजनिक गरीएको हो । गायक तथा संगीतकार योगेशकाजीको संगित रहेको गितमा शब्द तथा स्वर रोशन गुरुङको रहेको छ । गितको भिडियोमा गंगामाया समित र अलेक्स गुरुङले अभिनय गरेका छन । भिडियोको छायङ्कन, सम्पादन तथा निर्देशन राकेश गुरुङले गरेका हुन । डिजिट्ल नेपमा सर्वधिकाररहेको भिडियोका पोस्ट प्रोड्कसन् आर इन्टरमेन्टले गरको छ ।
सलमान खानको फिल्म प्रदर्शन हुँदा हलहरू प्रायः हाउसफुल हुन्छन् । अहिले सलमान ‘दबंग ३’ का लागि तयारी गरिरहेका छन्। यो फिल्म आगामी डिसेम्बरमा रिलिज हुँदै छ। यसैबीच फिल्मसँग जोडिएको रोचक प्रसंग बाहिरिएको छ। ...